Tantara an-tsary: manomana hetsika marobe ny Tantsary | NewsMada
Tantara an-tsary: manomana hetsika marobe ny Tantsary
Ho taon’ny asa fampiroboroboana ny tantara an-tsary na ny « bande dessinée » (BD) ity 2019 ity, ho an’ny fikambanan’ireo mpiangaly ity zavakanto iray ity na ny Tantsary.
Hisantaran’izy ireo izany ny famoahana boky tantara an-tsary, amin’io fiandohan’ny volana febroary io, araka ny nambaran’ny filohan’ny fikambanana, Andrianintsoa Njaka Ny Aina.
Hotontosaina amin’io volana io ihany koa ny fihaonan’ny mpikambana rehetra. Avy eo, hisy ny fiofanana, natao ho an’ny mpikatroka ihany aloha ary hosokafana ho an’ny olon-drehetra kosa, aorian’izay. Misy karazany roa ilay fiofanana io. Ny voalohany, ho an’ireo mbola tsy nanao tantara an-tsary mihitsy, izany hoe, ny olona sy ny ankizy vao tena hianatra sary sy BD, na efa manao kely fa te handalina ny fototra.
Ny mpikambana ao amin’ny Tantsary ihany no hiantsoroka ny fizarana traikefa amin’izany. Ny fiofanana sokajy faharoa kosa, ho an’ireo efa manan-talenta, izany hoe, fanampiana sy fanamafisana ny traikefa no hatao. Hisahana ny fampiofanana amin’izany kosa ny mpikambana Tantsary, efa manampahaizana sy matihanina na « expert ». Hanampy azy ny mpanao tantara an-tsary ivelan’ny fikambanana.
Tsy mijanona eo amin’ny BD ihany ity fiofanana ity fa mivelatra amin’ny tontolon’ny « graphic design ». Ankoatra ny fanofanana, hivoaka, amin’ity taona ity, amin’ny alalan’ny gazety boky na « magazine » ny angon-tantara na « album ». Hisy « teasing » kelin’ilay gazety boky havoaka amin’ny tambajotran-tserasera. Amin’ny boky taratasy na « version papier » kosa ny tantara feno.
Manaraka izany, mikasika ny « Gasy bulles », « festival » tokana sady lehibe mikasika ny BD malagasy, hotanterahina amin’ny volana jona, toy ny mahazatra, izany. Ezahina hatrany ny hanome vokatra vaovao sy hanomana hetsika maro mahakasika ny tantara an-tsary, araka ny fampanantenan’ny Tantsary. « Steampunk » ny lohahevitry ny « festival », amin’ity taona ity.